Anne Kamene Muoki | Li Tim-Oi Foundation
”Dị ka onye na-erite uru na Li Tim-Oi Foundation, enwere m ekele maka nkwado nke Foundation ahụ na nkuzi mmụta okpukpe m. Ntinye aka gị bụ n'oge kwesịrị ekwesị ma hụ na agbanwere m. N’oge gara aga, arụrụ m ọrụ dịka onye nkwusa ozioma na ụka m na-enwechaghị nghọta gbasara mmụọ gbasara ozi dị n’ihu m na ezi Onyenwe anyị kpọrọ m. Mgbe m gụsịrị akwụkwọ BD na Mahadum St. Paul, Limuru, enwetara m nghọta dị ukwuu banyere ọkpụkpọ oku nke Onyenwe anyị kpọrọ m ka m jee ozi na ụka Ya. Esi m n’obodo ebe ọdịbendị na-anaghị aga ebe ụmụ nwanyị na-aga chọọchị anaghị akwado ya. Ka ọgụ a na-aga n’ihu na-egosi na ụmụnwaanyị dịka ụmụ nwoke ibe ha nwere ike ije ozi n’ọgbakọ, Onyenwe anyị Chineke onye kpọrọ m n’ubi vaịn ya na-egosi na ọ bụ Chukwu nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke ndị ohu na ụka Ya.
Emere m onye dikon mgbe m gụsịrị akwụkwọ na St. Paul. N'afọ sochirinụ a abụrụ m onye nchụàjà ma ugbu a ana m ejere Chineke ozi dị ka onye ụkọchukwu nọ n'ọchịchị m nke ndị ụkọchukwu ụmụ nwoke na-achị. Ana m ekele Chineke maka Bishọp ACK nke Machakos, Rt. Rev. Joseph M. Kanuku, na nzukọ ọgbakọ ọgbakọ dị iche iche nke Diocesan maka ikwe ka edobekwa ụmụ nwanyị a zụrụ azụ ka ha chie ha ọrụ ịbụ ndị ụkọchukwu.
A na m akpọku unu n’ekpere maka ụmụnwanyị na-eje ozi na ụka a, ka Chukwu pụrụ ime ihe nile, onye na-akpọ anyị, ga-anọnyere ụmụ nwanyị ndị ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu oge niile ma hụ ka ha na-aga nke ọma ka alaeze Ya na-eto eto.